Sidee dib loogu soo celiyaa kalsoonida bisad? | Bisadaha Noti
Xiriirka bisadu ay la leedahay bini-aadamka waxay u dhowdahay inay la leedahay xubin kale oo ka mid ah noocyadeeda. Waa maxay tan? Filimadu waxay u dhaqmi doontaa sida ay u aragto inay ku habboon tahay iyadoo kuxiran daaweynta ay hesho. Si ka duwan eyga, haddii wax loo sameeyo isaga oo si weyn u caroonaya, waa inaan dadaalno - ka badan ama ka yar, taas oo waliba ku xirnaan doonta dhogorta laftiisa - si aan dib ugu soo ceshanno kalsoonidiisa.
Sababtaas awgeed, maalinba maalinta ka dambaysa, marka laga soo bilaabo kii ugu horreeyay, waa inaan qabannaa wax kasta oo suurtagal ah si uu si farxad leh noola noolaado. Ka dib oo dhan, waxaan nahay kuwa go'aansaday inaan la noolaano isaga. Weli, dhibaatooyinka marwalba way soo kici karaan, sidaa darteed haddii aad u baahan tahay inaad ogaato sida dib loogu helo kalsoonida bisad, ha joojin akhriska.
1 Maxaan u waayi karnaa kalsoonida bisad?
2 Sidee dib loogu soo celiyaa kalsoonida bisad?
2.1 Bisadu ma faraxsantahay mise maya?
2.2 Meel sii
2.3 Noqo mid jilicsan
2.4 La ciyaar isaga
2.5 Hawlahaas joogtada ahi kama maqna
2.6 Waqtiga qadada
Maxaan u waayi karnaa kalsoonida bisad?
Marka hore, waa muhiim inaan ognahay sababta kalsoonidaasi u luntay, maadaama haddii kale ay aad noogu adkaan doonto inaan ogaanno waxa aan sameyno si aan dib ugu soo ceshano. Sababaha ugu badan waa kuwa soo socda:
Bisadu waxay dareentay in la iska indhatiray: xaalada ugu caansan ayaa ah in bisadu maalintii oo dhan kaligeed ku qaadato guriga, marka qoyskiisa bini aadamka ah ay soo laabtaan si dhib yar ayey wax dareen ah u siiyaan inkasta oo uu aad u jecel yahay.
Si xun loola dhaqmay: xadgudubku ma aha oo kaliya jir ahaan, sidoo kale waa hadal. Waa run bisadu ma fahanto macnaha ereyadayada, laakiin waxbadan ayey ka ogtahay codadka iyo codkaba. Haddii dadkaagu ku qayliyo / ama ku garaaco, haddii ay muusig dhawaaqayaan, haddii ay ku dhibaateeyaan,… xayawaanku wuxuu ku noolaan doonaa cabsi iyo, dabcan, wuxuu baran doonaa inuusan aaminin aadanaha.
Iyo, ugu dambeynti, haddii aan sameyno wax kasta oo ka careysiin kara sida inaan ku qasabno inuu joogo meel ay ka muuqato inuusan isagu jeclayn, tusaale ahaan, ama haddii aanan u muujin kalgacal ama la ciyaarin.
Marka hore, waa inaan ka warqabnaa in bisadu tahay noole u baahan daryeel inta ay nooshahay. "Daryeel" macnaheedu maahan kaliya biyo iyo cunto, laakiin sidoo kale waxaan u jeedaa meel aamin ah oo raaxo leh oo aad ku noolaan karto. Intaas waxaa sii dheer, waa inaan tusno isaga, maalin kasta, sida aan u daneyno cayaaraha, salaaxida, iyo waliba mararka qaarkood (cuntada qoyan) ee bisadaha mararka qaarkood.
Haddii aan qaadanay bisad la xumeeyay, ama haddii sabab kasta ha noqotee beryahan aynaannaan siinin fiiro gaar ah, waa inaan aad ugu sabarnaa isaga y u fiirso jirkaaga si aad u fahamto waxa ay isku dayeyso inay noo sheegto. Waa inaad tartiib tartiib u socotaa Waa inaanan waligeen xoog ku qasbin xaaladda.
Markaan u tagno si aan u salaaxno, waxaan u oggolaan doonnaa inuu marka hore gacanteena uriyo ka dibna, haddii uusan sanka ka bixin ama uusan welwel qabin, waxaan si tartiib ah oo tartiib ah u salaaxeynaa dhabarkiisa Hadana hadaadan rabin inaad hesho koolkoolin, waxba ma dhacaan, waqti ayaa loo heli doonaa. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad maalin walba ciyaartid waxyarna waad fahmi doontaa inaanan wax dhibaato ah kuu geysan doonin.
Bisadu ma faraxsantahay mise maya?
Waa muhiim inkasta oo aan ku siinay xoogaa talo ah xagga sare, waxaad taqaanaa sida loo garto in bisaddaadu ku faraxsan tahay iyo in kale. Haddii markii uu ku arko, ay ardaydiisu weynaadaan, dhegihiisuna ay siman yihiin, oo jirkiisuna uu foorarayo, markaa malaha isagu ma xasilloon yahay. joogitaankaaga oo aad rabto inaad carartid
Hadduu cabsado, wuxuu ku dhuumaaleysanayaa koonaha guriga. Haddii aadan waligaa horay u sameyn, waa sababta oo ah wax dhacay oo cabsi kugu keenay oo aad baqeysid may waxaa laga yaabaa inaad kalsoonidaadu luntay.
Waa muhiim inaad ogaato waxa ey bisadu jecleyn iyo inaad adigu xakamayso waxa aadan jeclayn. In kasta oo haddii aadan hubin waxa ku dhici kara isaga, markaa waxaad raaci kartaa talooyinka soo socda si aad isugu daydo inaad mar kale kalsooni u hesho.
Sii bisaddaada meel ay ku dareento ammaan kuna dhiirrigeliso inay dareento kalgacalkaaga iyo kalgacalkaaga markale. Kalgacalkaaga ayaa kuu imaan doona markuu dareemo inuu diyaar yahay, laakiin waa inaadan ku qasbin inuu sidaa sameeyo haddii uu weli shakisan yahay. Tixgeli waqtiga ay diyaar noqon karto. Waa inaad u dulqaadataa.
Weligaa ha ku qaadin gacmahaaga haddii aad ogaato inuusan doonaynin, maxaa yeelay waxaad ku dhufan kartaa dharbaaxo wanaagsan. Hadaad qabato oo uu xaragoonayo, iska daaya isaga iyo ha u marto wadadeeda. Waa calaamad muujinaysa inaad u baahan tahay boos kuu gaar ah.
Haddii uusan dooneynin inaad waligaa soo qaadatid, markaa ha kuu sheego goorta aad rabto inaad salaaxdo oo aad ku sameyso jacaylkaaga oo dhan mar haddii uu kuu oggolaado inaad sameyso.
Noqo mid jilicsan
Markuu kuu oggolaado inaad salaaxdo, waa hab laguu sheego inuu mar kale ku kalsoon yahay, xitaa haddii uusan kuu oggolaan inaad soo qaado. Si kadis ah kuu raaca ama xoqitaanka lugaha sidoo kale waa calaamad fiican.
Waxaad isku dayi kartaa inaad salaaxdid intuu ku seexanayo madaxiisa ama dhegihiisa dhexdooda iyo xitaa garkiisa si aad u aragto inuu aqbalayo iyo in kale. Laakiin haddii bisaddaadu aysan rabin, iska ilaali. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa inaad ku cadaydo dhaqdhaqaaqyo jilicsan oo gaabis ah. Tani waxay ka dhigi doontaa inuu dareemo wanaag inuu agtaada joogo.
La ciyaar isaga
Markaad ogaato inay bilaabmayso inay kugu soo dhowaato, waxay noqon doontaa fikrad wanaagsan inaad bilowdo isku dayga la ciyaar isaga. Waxaad ku sameyn kartaa tan inaad dib u dhisto kalsoonida oo aad ka dhigto dareenkaaga inuu dareemayo inaad dhab ahaan isaga jeceshahay., waad ixtiraamtaa isaga iyo inaad jeceshahay inaad waqti la qaadato.
Waad adeegsan kartaa alaabta lagu ciyaaro ee bisadda ama wax uu jecel yahay inuu ku ciyaaro sida xarig ama duudduuban kartoon ah ... wax kasta oo uu kula raaxeysto waa la soo dhaweynayaa. Xusuusnow inay tahay waqtiga ciyaarta oo ay tahay inaad isaga siiso feejignaantaada oo dhan si uu dhab ahaantii u dareemo jacayl.
Hawlahaas joogtada ahi kama maqna
Jadwalka joogtada ahi waa muhiim dadka, laakiin sidoo kale bisadaha. Waxay jecel yihiin inay ogaadaan waxa xigi doona. Sidaa darteed, ka raadi jadwal meelaha kala duwan ee gurigaaga ah si aad ugu dhaafto dhinacaaga.
Waad isku dari kartaa ciyaarta iyo nasashada. Jadwalka jadwalkaaga waa mid muhiim ah sidaa darteed maskaxda ku hayso maan malintaad.
Inaad siiso bisaddaada daaweyn marwalba iyo kadib (daaweyn saaxiibtinimo bisad ah) sidoo kale waa fikrad wanaagsan inaad aaminto kalsoonida ay kugu qabto. Waxaad ku abaal marin kartaa dhaqankooda wanaagsan.
Sidoo kale, adigu quudiso oo sidaas ayaad ku abuuri doontaa xiriir aad u dhow oo aad la leedahay bisaddaada, maadaama ay had iyo jeer doorbidaan dadkaas daneeya cunnadooda. Waxaad isaga siisaa abaalmarino gacantaada ah si uu u ogaado inaad adigu tahay qofka isaga jecel.
Isdhexgalka waa inuu had iyo jeer noqdaa mid wanaagsan maxaa yeelay haddii bisaddaada ay mar labaad ka baqeyso canaan darteed, kalsoonida ayaa laga yaabaa inay mar kale jabto iyo in soo kabashada curaarta ay sii adkaan doonto.
Haddii aanu doonayn ama qarinayn, ha cayrin hana ku qasbin inuu wax ka cuno gacantaada. Dulqaad yeelo oo u oggolow inuu sameeyo markuu dareemo inuu diyaar yahay.
Haddii, inkasta oo dadaalkayaga, bilooyinku socdaan oo aynaan helin wax horumar ah, waxaa si weyn loogu talinayaa in lala tashado cilmi-nafsi yaqaan ama daaweeye feline
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Riyooyin » Sidee dib loogu soo celiyaa kalsoonida bisad?
Gaasaska ku jira bisadaha: sababaha iyo xalka